Inoita Kunyorera Kudonha Kunoshanda? | Martech Zone
Patakavhura patsva tsamba yedu, ini ndaida kunyatsoita chinyoreso chinongedzo chinhu chikuru pane yedu saiti. Isu takawedzera chinodonhedza chikamu kumusoro kwenzvimbo uye zvave zvisingaite. Nepo isu taimbowanzo tora kamwe kana vaviri vanyoreri zvisati zvaitika, ikozvino isu tinowana vakawanda vanyoreri vhiki imwe neimwe. Yekushambadzira Technology tsamba yetsamba iri kukura inozivikanwa kwazvo, iine vangangoita 3,000 vanyoreri!
Ndinoda kuwedzera zvimwe zvakadonhedza kumusoro uko - pamwe Facebook, Twitter, Vhidhiyo, Podcast, uye neKutsvaga tebhu. Iyo nzira huru yekuburitsa zvirimo pasina kudikanwa kwemushandisi kuenda kune peji idzva. Zvakare, tsoka yazvinotora yakanyanya kudiki pane fomu yekunyorera mubara repadivi rinotora!
Iyo heatmap yakapihwa na Simbisazve. Dai iyo isiri yeiyo heatmap, ini handina chokwadi chekuti ndingadai ndakaziva kuti vangani vanhu vanodzvanya ipapo! Ino ndiyo nguva yekusimbisa mameseji kumusoro uko kuti aite kuti vanyore.
Tags: heatmapkupisa mepusimbisa